Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. जस्टिन विवर र हेलेबीच सुटुक्क इङगेजमेन्ट – Emountain TV
एजेन्सी, २६ असार । विश्वविख्यात क्यानेडेली पपस्टार जस्टिन विवरले अमेरिकी मोडेल हेले बाडविन्सँग इङगेजमेन्ट गरेका छन् । अमेरिकाको दक्षिण भेगमा पर्ने बहमास टापुस्थित एक रेस्टुरेन्टमा उनीहरुले इङगेजमेन्ट गरेको बताइएको छ ।
केही समय यता उनीहरु डेटिङमा थिए । हेलेसँगको प्रेममा निकै खुसी देखिएका जस्टिनले नै इङगेजमेन्टको प्रस्ताव गरेको पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ । हेलेका बाबु हलिउड अभिनेता एवम् निर्माता स्टेफेन बाडविन्ले ट्विट गर्दै उनीहरुको इङगेजमेन्टको पुष्टि गरेका हुन् । तर उनको ट्विट केही समयपछि हटाइएको थियो । जस्टिनका बाबुले पनि फोटोसहित ‘एक्साइटेड फर नेक्स्ट च्याप्टर’ भनेर ट्विट गर्दै इङगेजमेन्टको पुष्टि गरेका छन् ।
२४ वर्षीय पपस्टार जस्टिन् र २१ वर्षीया मोडेल एवम् टेलिजिभन पर्सनालिटी हेलेबीच पुरानो चिनजान भए पनि केही महिना यतामात्रै उनीहरुबीच आत्मीयता बढेको बताइएको छ । सन् २०१६ मा केही समय डेटिङ गरे पनि जस्टिन र उनकी पूर्वप्रेमिका सेलेना गोमेजबीच पुनर्मिलन भएकाले जस्टिन र हेले अलगिएका थिए । पछिल्लो समय उनीहरुले पुन डेटिङ सुरु गरेका हुन् ।
अमेरिकाको एरिजोनमा जन्मेकी मोडेल हेलेको समर्पण, विश्वास र मायाबाट जस्टिन अत्यन्तै प्रभावित भएको बताइएको छ । सन् २००७ देखी गायन करियर सुरु गरेका जस्टिनले बेबी, सरी, लभ युवरसेल्फ, ह्वाट डु यु मिन, लभ मी, नेभर से नेभरलगायत दर्जनौं गीत गाइसकेका छन् । अन्नपुर्णबाट